Indlela Yokuguqula Ividiyo Yezidivayisi Eziphathekayo
Ama-Digital Camera Iziqondiso namaTutorials
Iguqula ividiyo ukuze idlale kumadivayisi aphathekayo
Noma yikuphi ukuguqula kwevidiyo
Abathandi bevidiyo banezinketho eziningi kulezi zinsuku zokubuka ama-movie ekuhambeni. I-Smartphones, amaphilisi afana ne -iPad , abadlali bezindaba kanye nezinhlelo zokudlala eziphathekayo ezifana ne-Vita noma i-PSP endala zivumela abantu ukuba bathole ukulungisa ividiyo yabo ephathekayo cishe noma kuphi.
Kuye ngokuthi imaphi amavidiyo akho ayenziwe, noma kunjalo, ukuwenza ukuba badlale kudivayisi ethile kungasho kalula kunokwenziwa. Ngenhlanhla, abaguquli bevidiyo banikeza indlela yokunciphisa amafomethi akho, angahambisani nawo ukuze bakwazi ukudlala kudivayisi yakho yokuzikhethela. Nasi isifundo esilula ukukusiza ukukuqondisa ngenqubo yokuguqulwa.
Yini oyodinga kulokhu okufundiswayo:
Ikhompyutha (i-Windows noma i-Mac)
Uhlelo oluthiwa yiliphi i-Video Converter
Ngenxa yokulula, ngakhetha ukusebenzisa inguqulo yamahhala ye-Video Converter yalesi sifundo. Kufana nokwamukela inzuzo yenhlelo yamahhala kanye nokuzinza nokupholisa uhlelo olukhokhelwe.
Inguqulo yamahhala ayinazo zonke izici zenguqulo ekhokhelwe kodwa kuningi kakhulu ongakwenza konke ukuguqulwa okudingayo ukususa i-hit kuya esikhwameni sakho. Kungabuye futhi ihlanganise amafomethi wevidiyo, okuyi-plus.
Kusayithi elisemthethweni, uzoba nokukhetha ukulanda inguqulo ye-Windows, manje esekela i-Windows 10, noma inguqulo ye-Mac. Ukuze uthole i-Mac version, chofoza ithebhu ethi "ye-Mac" phezulu kwekhasi. (Lokhu kufundisa kusekelwe kuyi-Windows version.)
Ukuguqulwa kwevidiyo eyisisekelo
I-AVC ihambisane nezinguquko ezithile kusukela kulokhu kufundiswa kuqala. Inguqulo yakamuva manje ikuvumela ukuthi uguqule ngokushesha amavidiyo ngezinyathelo ezintathu ezilula. Okokuqala, nje ividiyo noma amavidiyo ofuna ukuguqulwa ngethebhu elingenhla kwesokunxele bese ukhetha ifomethi okukhipha oyifunayo ngakwesokudla. Uma usukhethile ifomethi oyifunayo, chofoza inkinobho yokuguqula.
Uma ufuna ukuba nefayela elizosebenza cishe cishe wonke umdlali lapho, ukubheja kwakho okuhle ukuguqula ifayela lakho kufomethi ye-MPEG-4, eyaziwa nangokuthi i-MP4. I-MP4 ifana nefomethi ye-facto yabadlali bevidiyo abaphathekayo. Isekelwa amadivaysi e-iOS, ama-smartphone e-Android, nabanye abadlali.
Ukulungisa izilungiselelo zakho zokuguqulwa
Ukuze uthole ukuguqulwa okuphambili, uzobona ukuthi unenketho yokuguqula ubukhulu obufana ne-480p. Lokho kusho ngokuyisisekelo isinqumo kanye "nesici sendawo." Uma ungajwayele leli gama, cabanga ngokuthi "ukuma" kwevidiyo yakho. Ama-agelethi, amathelevishini wokuchaza okujwayelekile, isibonelo, sebenzisa ububanzi obuncane be-4: 3, ngokujwayelekile kwisinqumo se-480p. Ngakolunye uhlangothi, ithelevishini emisha, ephezulu-definition, isebenzisa ububanzi obubanzi obuyi-16: 9 ku-720p, 1080p noma ngisho nasezingeni eliphezulu, 4K.
Okungcono, uzofuna ukugcina isilinganiso sakho sokuqala sevidiyo yomthombo wakho ukuze ungazitholi ukubuka ama-movie anezinga elihlelekile. Ukuguqula ividiyo engu-4: 3 ibe ngu-16: 9 kuzokwenza abantu nezinto zibukeke zikhuluphele. Ukuguqula i-16: 9 ibe ngu-4: 3 kuzothumela ividiyo ngezinhlamvu ezidabukisayo nezindebe eziphazamisayo. Ukubuyisela kabusha: amavidiyo afakwe ebhokisini angama-4: 3; Amavidiyo avulekile angama-16: 9.
Ngokuvamile, uzodinga ukukhetha isinqumo esifana nedivayisi ozoyibuka ividiyo kuso. Ngaphandle kwalokho, ungakhetha ukuxazulula okuphezulu njenge-720p no-1080p, okuyizinga eliphezulu lamakhompyutha namaphilisi namuhla. Hlala ukhumbula ukuthi ukuguqulwa kuzothatha isikhathi eside futhi usayizi wefayela wevidiyo yakho eguquliwe kuyoba mkhulu uma usebenzisa isinqumo esiphezulu.
Kusukela kulokhu, konke okudingeka ukwenze ukukopisha ividiyo eguquliwe kusuka endaweni yakho yokugcina ukuya kudivayisi yakho yeselula noma kumdlali futhi ulungile ukuhamba.
Inguqulo yakamuva ye-AVC nayo ikuvumela ukuthi ushise amavidiyo ku-DVD noma ulande amavidiyo kusuka ku-YouTube. Ukulanda ividiyo ye-YouTube, sebenzisa imenyu ye-URL bese unamathisela ikheli levidiyo ye-YouTube ofuna ukulanda. Ukushisa ikhophi yevidiyo onayo kwi-DVD, mane uchofoze kuthebhu ye-DVD ye-Burn futhi usebenzise imenyu ye-Add Video ukuze ukhethe ividiyo oyifunayo.
Indlela yokuthola umphumela we-Bokeh ku-smartphone zezithombe
Ukufunda ukusebenzisa i-Digital Photo Frames
Funda indlela yokuxhuma ikhamera kukhompyutha
Ingabe i-Teleconverters kufanele isebenzise?
Indlela Yokubonisa Izithombe ku-TV Yakho
Indlela Yokugwema Izinkinga Zemibala Yekhamera
Indlela Yokusheshisa Ngokushesha futhi Yenza I-Digitize Izithombe
Shintsha isihloko se-Thread uma isihloko shintsha
I-Kodak Home Video Monitor Monitor CFH-V15
I-DSL neThebula: Ukuqhathaniswa kwe-Broadband Internet Speed
Amageyimu we-Widget Best Free Online
Indlela yokusebenzisa umsindo wokuhlola ku-iTunes
Thola Izikhombisi Zokuhamba Nge-Google Maps
Ukuthuthukisa ikhwalithi yomsindo ngekamelo le-Acoustic Treatments
I-CEDIA EXPO 2013 Ekhethekile Yokugubungula
I-Grimer-Pokemon # 88
Amageyimu we-Top 10 WiiWare
Ithuluzi lokusondeza ku-Adobe InDesign
Ukurekhoda Kusuka ku-DVR yekhebula / isathelayithi kuya kwi-DVD Recorder
Indlela Yokwezifiso Imenyu Ye-Firefox namathuluzi weThuluzi
Ukusethwa kwe-BIOS Usizo Lokufinyelela Kwamasevisi Amasevisi Wekhompyutha Evelele
Sebenzisa i-Mac yakho ukuze uhlanganyele iwebhusayithi
Indlela Yokuhlela I-AutoCorrect Settings ku-Microsoft Office Word
Phatha ama-Plug Sandboxed ne-Unsboboxed ku-Chrome
Izici ze-Stereo zezimpawu nezincazelo
Iyini i-Boyce-Codd Form Normal (BCNF)?
Isebenzisa izimpawu ze-HTML TABLE Element
Kungani Abakhulumi Bezimoto Bekhala?